လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖ၀ါးလက္ခာကိုကြည့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အစိတ်အပိုင်းကို သိနိုင်ပြီ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သုတစာပေကဏ္ဍ»အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ»လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖ၀ါးလက္ခာကိုကြည့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အစိတ်အပိုင်းကို သိနိုင်ပြီ	Leaveacomment
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖ၀ါးလက္ခာကိုကြည့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အစိတ်အပိုင်းကို သိနိုင်ပြီ	Posted by danyawadi on January 9, 2016 in အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ, Photos	1. Sinus=လူ့ဦးခေါင်းခွံတွင်နှာခေါင်းပေါက်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ဦးခေါ င်းခွံအတွင်း လေလမ်းကြောင်း။
2. Neck= လည်ပင်း။ (တိရစ္ဆာန်) လည်ပင်းသား။
4. Ear=နား။ နားရွက်
5. Eye=မျက်စိ။ မျက်လုံး
6. Vocal Cords=အသံကြိုး။
9. Thyroid=ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိန်းသည့်ဒြပ်တစ်မျိုး ကိုထုတ်ပေးသော သိုင်းရိုက် အကျိတ်။
10. Diaphragm= ရင်ဘတ်နှင့် ၀မ်းဗိုက်အကြားရှိ ကြွက်သားစိုင်။ ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သား။
11. Heart=နှလုံး။ နှလုံးသား။ စိတ်နှလုံး။
13. Pancreas=အစာခြေမှု အကျိုးပြုသော အရည်တစ်မျိုး ထုတ်ပေးသည့်ဂလင်း။ ပန်ကရယ်။ မုန့်ချိုအိတ်။
14. Adrenal Gland=(ကျောက်ကပ်အနီးရှိ) အဒရီနယ် (ဂလင်း)။
15. Kidney=ကျောက်ကပ်။ ကျောက်ကပ်ပုံ။
16. Transverse Colon=ကန့်လန့်ဖြတ်။ အူမ။
18. Small Intestine=သေးငယ်သော အူ။ အူသိမ်။
19. Descending Colon=အူမ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆင်းသက်သည်။
20. Sciatic Nerve=တင်ပါးရိုးနှင့်စပ်သော အာရုံကြော။
21. Knee=ဒူး။ ဒူးခေါင်း။ ဒူးဆစ်။
22. Thigh=ပေါင်။ ပေါင်တံ။
26. Stomach=အစာအိမ်။ ဗိုက်။ ၀မ်း။
← အစ္စလာမ်က ဝက်သား စားသုံးခြင်းကို တားမြစ်သော လူသိများ တဲ့ အချက်	Breaking News: 9-1-2016 နေ့ မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်ပုံ →